शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने हो भने सर्वप्रथम तीन घण्टे परिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्छ : प्राचार्य सुदन डोटेल - Shiksha Sansar
काठमाण्डौँ । बिद्यार्थीहरूलाइ बिगत एक दशकदेखी निरन्तर गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्दै नेपालकै एक उत्कृष्ट विद्यालय बन्न सफल लिभरपुल उ. मा. बिले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई कसरी गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ ? सरकारले कस्तो शिक्षा नीति ल्याउदाँ समग्र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान होला ? र विद्यायार्थीहरुलाई सैदान्तिक नीतिमा पनि कसरी शीपमुल शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा आधारित रहेर लिभरपुल उ.मा.बिका प्राचार्य सुदन डोटेलसँग शिक्षा संसारका संवाददाताले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको शाराशं
तपाइको कलेज कसरी कसरी अगाडि बढि रहेको छ
हामी तिब्र रुपमा अगाडि बढिरहेका छौँ । हाम्रो जुन टिम छ त्यसको बारेमा सायद बजारमा पनि सबैलाइ थाहा होला । एउटा गौरबमय इतिहास बोकेका मानिसहरु लागेको टिम छ । जुझारु कर्तव्य निष्ठ व्यक्तीहरु हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा हामी कि काम नगर गरेपछि सतप्रतिशत गर भन्ने मुलनाराका साथ विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ ।
विद्यार्थी मैत्री वातावरण निमार्णका लागि के कस्ता कार्यहरु गरिरहनुभएको छ
अहिलेको शिक्षा दिने चलन पहिले हामी पढ्दाको जस्तो छैन् । धेरै परिवर्तन छ । गुरुहरुले हप्काएर दप्काएर पढाउने भन्ने समय अहिले छैन् । पश्चिमी देशहरुमा पहिले नै यस्तो प्रणालीको अन्त्य पहिले गरिसकेको थियो र पुर्वमा अहिले बिस्तारै हढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो समय विद्यालयहरुमा विद्ययार्थीको भनोभावना बुझेर शिक्षा दिने गरिन्छ ।
जस्तो हाम्रो स्कुलको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी बच्चालाई पढाई बाहेक अन्य के कुरामा इच्छा छ त्यसलाइ पनि ध्यान दिने गछौँ, पढ्ने त एउटा बेसिक कुरा हो, गीत गाँउछ नाच्न कविता भन्न नाच्न रुचाँउछ कराते खेल्न रुचाउँछ ति सबै कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर बालकालिका पाढाइन्छ । कक्षा ११ र १२ मा ती सबै कुरा संभवत नहोला तर कसले के मा इच्छा राख्छ त्यही बिषयलाइ केन्द्रित गरेर हामी विद्यार्थीलाई अगाडि बढ्न सल्लाह दिन्छौँ ।
कलेजलाई सुदृढ बनाउन के कस्ता योजनाहरु बनाउनु भएको छ ?
अहिले हामी बिशाल योजनाका साथ अघि बढिरहेका छौँ, हाम्रो नयाँ भवन बन्दै छ । त्यसको फेलेक्सहरु हामीले टासिसकेका छौँ र यसका केही प्राविधिक कामहरु छन् र त्यही कामहरु गरिरहेका छौँ । भौतिक पुर्वाधार सहितको आठ तलाको भवन निर्माण गर्न लागी रहेका छौँ । हामी आफैमा राम्रो त छौ नै त्यसलाई अझ व्यबस्थित र आधुनिक शैलिमा लैजाने थप योजनाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।
शीपमुलक शिक्षा भन्दा पनि सैसान्तिक शिक्षा दिने हाम्रो जुन व्यबस्था छ जसले गर्दा पढिसकेपछि के गर्ने भन्ने अन्योलमा पर्छन, त्यस समस्यालाई सामधान र्गन तपाई ले विद्यायार्थीलाई शीपमुलक शिक्षा दिन अन्य कुनै व्यबस्था गर्नभएको छ ?
शिपमुलक शिक्षा भनेको राज्यकले तय गर्ने कुरा हो राज्यले जुन व्यबस्था बनाएको छ त्यही ब्यबस्थामा हामी हिड्नु पर्नै भएकाले राज्यले तोकिएको सिमा भन्दा बाहिर गएर हामी काम गर्न सक्दैनौ ।
किन भने अन्तिममा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डमै गएर विद्यायार्थीले परिक्षा दिनु पर्ने हुन्छ । राज्य नै शीपमुलक शीक्षामा केन्द्रित छैन् भने हामीहरुले शीपमुलक शीक्षामात्र दिन मिल्दैन् ।
तर पनि हामीले के कति शीपमुलक शिक्षा दिन सक्र्छौ भने कलेजमा त यो सबै समम्भ्व नहोला तर पनि स्कुलमा हामीले के गर्न सक्छौ भने सँगितकार ल्याएर संगीत सिकाउन सक्छौँ, खेलाडी ल्याएर बास्केटबल फुटबल सिकाउन सक्छौ यी त शिपमुलक होनी संगीत जानीयो अथवा राम्रो खेलाडी भइयो भने भोकै त मरिदैन ।
पढइलाई बाधा नपर्ने गरी यस्ता कुराहरु सिकाउन सकिन्छ । यसरी हामीले शीपमुलक शिक्षालाइ अगाडी बढाएका छौ तर शैक्षिक नियम बाहिर गएर काम गरेका छैनौ सायद अब शिक्षामा पनि परिवर्तन होला परिर्वतन गराउने कुराहरुपनि आइरहेका छन् । नेपाल दिनानु दिन बदलिदै छ र यो खुसीको कुरा पनि हो ।
कलेजको शैक्षिक गतिधिलाई अझ क्रियाशिल बनाउन थप योजनाहरु के छन् ?
यस अघि पनि मैले भने नयाँ भवन बनाउना साथ नायाँ सोच नयाँ बिचार नयाँ कार्य योजना त्यो भवनले नै लिएर आउछँ । मेरो मतलब भवन मात्रै बनाउने अरु केही नगरेर काम छैन् । त्यसैले गर्दा हामीहरुसँग धेरै कार्य योजनाहरु रहेका छन् । पहिला हामी भवन निर्माण योजनमा नै केन्द्रित छौँ ।
कस्तो शिक्षा नीति आयोभने समग्र शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान होलान ?
सर्वप्रथम त पहिला हाम्रो तीन घन्टे परिक्षा प्रणालीे जुन छ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र सय नम्बरको परिक्षा प्रणाली परिवर्तन नहँुदा सम्म हामी उही पुरानै बाउ बाजेको पालामा जस्तो परिक्षा प्रणालीमा नै रहन्छौँ त्यसैले यस प्रणालीलाई हटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ । तर मैले यो प्रणाली सतप्रतिशत गलत छ भन्न खोजेको भने हैन् । ‘
अन्तिममा, यसकलेजको स्थापना कहिले भयो र यहाँ कुन कुन संकायका बिषयहरुको पढाई हुन्छ ?
हाम्रो यस विद्यायालय स्थापना भएको एक दशक भयो बि स २०६७ सालमा स्थापना भएको हो र अहिले हामीसँग विद्यायालय पनि छ । कक्षा ११ र १२ तर्फ बिज्ञान, मानविकी र व्यबस्थापन बिषयको पढाइ हुन्छ भने ब्याजलर तर्फ बिबिएस, बिएसडब्लु, बिसिए र बिबिएम संकायका बिषयहरुको पाढाई हुने गरेको छ ।